सपनाको उडान र बेस्वादिलो स्वदेश मोह - फिचर - नारी
अमेरिका धेरैका लागि सपनाको देश । आफ्नो जीवनकालमा एकनपटक अमेरिका पुग्ने सपना धेरैजसोमा हुन्छ । अमेरिका गएर फर्कनेहरूको अर्कै प्रकारको जीवन शैली देखेर पनि धेरैले अमेरिकाको सपना पाल्ने गरेका छन् । लाखौं खर्चिएर मीठो सपनासहित अमेरिका भासिनेहरूको ठूलै जमात छ नेपालमा ।
चोर बाटो समातेर वा जिन्दगी नै जोखिममा पारेर अमेरिका पस्ने नेपालीहरू पनि थुप्रै छन् । अमेरिका भनेपछि मरिहत्ते गर्नेहरू कति छन् कति ? अमेरिका जाने प्रलोभनमा दलाललाई आफ्नो भएभरको सम्पत्ति दिन तम्सिनेहरू उत्तिकै छन् । अमेरिका पुग्न पाए जीवन समृद्ध बनाउँथें भन्नेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् हाम्रो समाजमा ।
सन् १९९८ को डिसेम्बरमा अमेरिका छिर्दा पुराना अभिनेता सरोज खनालको मनमा पनि यस्तै केही सपना हुँदो हो । त्यही सपनाको जगमा टेकेर उनी करिब १६ वर्ष अमेरिका बसे । एक सांस्कृतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका सरोज खनालमा देश छोड्ने क्रममा अमेरिकाप्रति उति सारो मोह थिएन तर जब उनी अमेरिका पुगे उनको मन अमेरिकामा यसरी गढ्यो की उनी नेपाल फर्कनै सकेनन् ।
अमेरिकाको समृद्ध जीवन हेरे, आफ्ना दुई सन्तानको भविष्य सम्झिएर उतै बसे । देशको करियर छाडेर अमेरिका बसेका सरोजले परिवारलाई समृद्ध बनाए । सन्तानको भविष्य सुन्दर बनाए । घर, गाडी सबै जोडे । यद्यपि अमेरिका बसाइका झन्डै ६ हजार २ सय ५ दिनमध्ये कुनै एकदिन खुसीको सास फेर्न नसकेको कुरा बताउँदै अमेरिकाको ग्रिन कार्ड ब्यागको एउटा कुनामा थन्काएर आफ्नै देश फर्किए उनी । सरोजले अमेरिका नपुगेसम्म मात्र सपनाको संसार हो, त्यहाँ पुगेपछि एकदम भिन्न सत्यसँग साक्षात्कार हुने कुरा बताएका छन् । स्वर्गजस्तो नेपाल छाडेर अमेरिका हान्निएका सरोजलाई १६ वर्षपछि स्वदेश फर्कदा पनि नेपाल स्वर्ग नै लाग्यो ।
अमेरिकाबाट नेपालमै बसोबास गर्ने गरी फर्किएपछि सरोज फेरि चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय भएका छन् । बेला–बेला अमेरिका पुग्ने खनाल अहिले आफ्नै व्यवसायमा समेत व्यस्त छन् । यद्यपि सरोजको नेपाल फिर्ती र त्यो समय उनले दिएका अभिव्यक्तिप्रति उनकै शुभचिन्तकहरू सकारात्मक देखिएनन् । ऊर्जाशील समय अमेरिकामा बिताएर नेपाल फर्किएका सरोजको देशभक्ति बेस्वादिलो भएको टिप्पणी धेरैको थियो ।
सपनाकै उडान भरेर अमेरिका पुगेकी अर्की कलाकार हुन्–अभिनेतृ गौरी मल्ल । अन्य क्षेत्रका मानिसलाई भन्दा अमेरिका उड्न कलाकारहरूलाई निकै सजिलो छ । कलाकारिताको आफ्नो त्यही पिआर बेचेर अमेरिका पसेकी अभिनेतृ गौरीले पनि ग्रिन कार्ड त पाइन् तर उतै जीवन निर्वाह गर्न भने सकिनन् । त्यसैले रंगीन सपना बुनेर टेकेको अमेरिका छाडेर उनी नेपाल नै फर्किन् । नेपालमै बस्ने गरी फर्किएकी अभिनेतृ मल्लले भने आफू पछि पनि अमेरिका जानसक्ने संकेत गरेकी छिन् । केही वर्षअघि अमेरिका छाडेर नेपाल फर्कने क्रममा उनले भनेकी थिइन्–‘अहिले म आफ्ना बुवाआमाको स्याहारका निम्ति नेपाल जान लागेकी हुँ । पछि फेरि अमेरिकामै भेट हुनसक्छ ।’
अभिनेतृका रूपमा सफल कलाकार करिश्मा मानन्धर चलचित्रमा गरेको लगानी डुबेपछि अमेरिका उडिन् । केही समय अमेरिकामा गुजारेकी मानन्धरले पनि सपना र वास्तविकतामा फरक पाइन् । करिश्माको मन उतै रमाउन सकेन । उनी पनि केही वर्षको अमेरिका बसाइलाई पूर्णविराम लगाउँदै स्वदेश फर्किन् र नेपाली सिने उद्योगमै सक्रिय भइन् । त्यसपछि उनमा केही राजनीतिक चेत पनि पलाएको पाइन्छ । करिश्माले बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति नेपालमा लागेर राजनीति सुरु गरिन् । नेपाल फर्किएपछि करिश्माले अमेरिकाप्रति उति साह्रो आशक्ति देखाएकी छैनन् ।
लामो समय अमेरिका बसेर पनि नेपाली मन परिवर्तन गर्न नसकेका अर्का अभिनेता हुन्–रमेश उप्रेती । करिब एकदशक अमेरिकाको माटोमा पसिना बगाएका रमेश केही वर्षअघि नेपाल फर्किए । नेपाली चलचित्रमा जमेर काम गर्दागर्दै अमेरिका पुगेका रमेशको जीवन अमेरिका बसाइ सँगै परिवर्तन भयो । नेपालमा एक किसिमको चार्म तथा स्टारडमको जीवन बाँचेका रमेश अमेरिकाको भीडभाडमा कता हराए कता ? उनी आफूले आफैलाई खोज्ने समय पनि पाएनन् । आफैसँग लुकामारी गर्दै ९ वर्ष अमेरिकाको बाटो नापेपछि उनी पनि अमेरिकासँग अघाएर ‘आफ्नै देश प्यारो’ भन्दै नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएलगत्तै रमेशले चलचित्र ‘ब्रासलेट’ मा काम गरे । पर्दामा कमाल गर्दागर्दै अमेरिका पसेका यी अभिनेताको खासै क्रेज देखिएन ब्रासलेटमा ।
९ वर्षपछि नेपाल फर्कदा उनले छाडेर गएको भन्दा फरक धारका चलचित्रको निर्माण अघि बढिसकेको थियो । उनी अहिले फरक धारबाट अघि बढिरहेको सिने नगरीमा बामे सर्दैछन् जसको उदाहरण हो–चलचित्र ऐश्वर्य जुन उप्रेतीको पछिल्लो सफल चलचित्र हो ।
रमेश, गौरी, करिश्मा र सरोज खनालहरू केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । रंगीन सपना बोकेर हवाइजहाज चढेका धेरै कलाकार आफै खुम्चदै स्वदेश फर्किएका छन् । लामो समय अमेरिकामा संघर्ष गर्दा पनि ग्रिन कार्ड नपाएपछि स्वदेश फर्कने कलाकारहरूको सूची पनि लामै छ । गायक कर्ण दास, कलाकार राजाराम पौडेल, गायक यम बराल आदि पनि अमेरिकाको सपना त्यागेर नेपाल फर्किएका छन् ।
अमेरिका छाडेर स्वदेश फर्कने क्रममा कलाकारहरूले सपना र जीवनबीच जे–जस्ता अन्तर देखाए पनि नेपालीहरूको अमेरिका मोह भने कम हुन सकेको छैन । अमेरिकाकै सपना हेर्दै हुर्कने युवाहरूको ठूलो जमात छ नेपालमा । नेपाली माटोमा शान र पहिचान दुवै बनाएका केही कलाकार स्वदेश फर्किए पनि त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी कलाकार आज पनि विदेशी भूमिमा रगत र पसिनासँग आफ्ना सपना साटिरहेका छन् । यो सूचीमा जल शाह, सारंगा श्रेष्ठ, पूजा चन्द, ऋचा घिमिरे, कृष्टि मैनाली, सज्जा मैनाली आदि नायिका पनि छन् ।
पुस १७, २०७३ - सपनाको काष्ठमण्डप